Waraaqaha Xirfadle ee Transgenderism | CAADI
Waraaqaha Xirfadle ee Transgenderism.
Fiktooriya Fiktooriya waxay mamnuucaysaa beddelka tijaabada lamaanaha ee carruurta. - Prof John Whitehall
AKHRI WAX DHEERAAD AH ....
WAA CUDURKA DHAQANKA EE Jinsiga AH - Prof Dianna Kenny
In kasta oo ay tahay iskuday in lagu eedeeyo ifafaaleynta faafitaanka bulshada ee da'da dijitaalka ah, oo ay dadku, dhallinyar iyo da 'weyn, ay ku sii xirnaanayaan aaladaha warbaahinta bulshada, iyagoo si xamaasad leh u baaraya shaashaddooda wararkii ugu dambeeyay, moodada, goobta fasax, xafladda riwaayadda, ama shukaansi goobta si loo helo "fooro" (ie, cabsi ka maqnaansho), faafin bulsheed ayaa saadaalisay soo bixitaanka 'cyberage', oo markaa asalkeeda ku meeleynaya maskaxdiisa bini-aadamka, kuna meelaynaya warbaahinta bulshada doorkeeda hagitaan hufan oo faafinta .
Arimaha muhiimka ah ee go'aan ka gaarista daaweynta kala guurka lamaanaha: Su'aalaha & Jawaabaha. - Prof Dianna Kenny
Maqaalkan, waxaan kaga hadlayaa arrimaha muhiimka ah doodaha transgender-ka maadaama ay quseeyaan carruurta iyo dhalinyarada. Kuwaas waxaa ka mid ah: “Daaweynta kala guurka lamaanaha” ma mid amaan ah, “daaweyn” iyo danta ugu wanaagsan ee cunugga? Markaan tixgalinayo su’aalahan, waxaan sahamiyaa cawaaqib xumada cawaaqibka leh ee xakamaynta baaluqnimada iyo hormoonnada galmada, oo ay ka mid yihiin dhalmo la’aanta iyo xaalado kale oo caafimaad iyo ujeedka loo saadaalinayo is dilka in la daweyn waayo.
Kaqeybgalka isboortiga haweenka iyo xaqiijinta jinsiga: Koorso isku dhac ah oo anshaxa caafimaadka ah. - Prof Dianna Kenny
Sanadkii 2009-kii, Cayaaryahanka reer Koonfur Afrika Caster Semenya ayaa ku guuleystey, meel 20 mitir u jirta orodka ugu dhow, munaasabaddii 800m ee haweenka ee ka dhacday horyaallada adduunka. Guusheeda waxay ahayd mid gaagaaban. Eedeymaha ayaa ka dhashay in Semenya uu “runtii ahaa nin.” 18-jirkan oo ka soo jeeda tuulo sabool ah oo ku taal Webiga Limpopo ee Koonfur Afrika ayaa noqotay mawduuc aan laga fiirsan oo qaylo-dhaan warbaahinta caalamiga ah oo ay ka mid tahay siidaynta faahfaahinteeda caafimaad ee gaarka ah iyada oo aan oggolaansho laga haysan.
Kheyraadka Dysphoria ee Jinsiga ee Adeeg Bixiyeyaasha: Dr. William Malone
Caafimaad ahaan, ereyga transgender / transsexual waxaa loola jeedaa shaqsi qaaday tilaabooyin muhiim ah si uu naftiisa ugu soo bandhigo bulshada sida lab iyo dhadig midka kale, dadaal si loo yareeyo nabarro aad u daran oo joogto ah. Ma jiro qof ku dhashay jinsi ama transsexual mana jiro saynisyahano halis ah oo weligiis sheegtaas. Suuragal maahan in lagu dhasho jirka "qaldan" jirka ("maskaxda maskaxda" ee jirka gabadha tusaale ahaan)).
Galmada iyo Jinsiga - Dr. Paul McHugh
Xusuus-qorka tifatiraha: Su'aalaha la xiriira galmada iyo dheddig-laboodka waxay ku qotomaan qaar ka mid ah dhinacyada ugu dhow iyo nolosha shaqsiyadeed ee nolosha aadanaha. Sanadihii ugu dambeeyay iyaguna waxay ka xanaajiyeen siyaasada Mareykanka. Waxaan bixinaa warbixintaan - oo uu qoray Dr. Lawrence S. Mayer, oo ah cilmi-nafsi ku takhasusay cilmiga dhimirka, iyo Dr. Paul R. McHugh, oo ku dooday inuu yahay dhakhaatiirta maanka ee ugu muhiimsan Mareykanka qarnigii lasoo dhaafay.
Hoyga Qoyska - New Zealand. Digniinta dhaqtarka carruurta ee New Zealand - Prof John Whitehall
Faafida 'dysphoria dysphoria' ee carruurnimada 'ayaa ku sii faafaysa dunida Galbeedka. Ka dib markii ay ka qarxeen durdur wax ka yar toban sano ka hor, hadda waxaa jira kor u kac ah oo tirada carruurta ah oo loo soo bandhigayo unugyo gaar ah oo loo sameeyay isbitaalada waaweyn ee carruurta iyada oo cabashada ah 'ay ku dhasheen jirka qaldan' ..
Codsi Baaritaan Baarlamaan oo ku saabsan Gudbinta Bulshada iyo Caafimaadka ee Caruurta qaba Naafada Jinsiga - Prof John Whitehall
Waxaan u qorayaa inaan kaaga mahadceliyo sida aad uga welwelsan tahay tirada carruurta sida dhaqsida leh u kordheysa ee carruurta Australiyaanka ah ee la sheegay inay la ildaran yihiin silsilada lab ama dheddig iyo in aan muujiyo welwelkeyga la'aanta la'aanta aasaasiga ah ee sayniska ee daaweynta daweynta dysphoria ee carruurta.